သင်မသိနိုင်တဲ့ ဘေဘီလေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်သော အံ့သြစရာ (၁၀)ချက် - Lifestyle Myanmar
ကလေးငယ်လေးတွေက အရမ်းအံ့သြဖို့ကောင်းပြီး သူတို့ကို ထိုင်ကြည့်နေယုံနဲ့ အချိန်များစွာ ကုန်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကလေးငယ်တွေအကြောင်းကို ကျွန်မတို့ အားလုံးသိတယ်လို့ ထင်ကြသော်လည်း ကျွန်မတို့ မသိသေးတဲ့ ထူးခြားသော အချက်အလက်တွေ ရှိပါသေးတယ်။ ဥပမာ-
မွေးကင်းစကလေးငယ်တစ်ယောက်မှာ နို့ရည်ထွက်တတ်တယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား? မွေးကင်းစကလေးငယ်များတွင် နို့အုံငယ်ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးကာစအချိန်၌ နို့ထွက်လေ့ရှိပါသည်။ ဒါကရှားပါးသော်လည်း အမိဝမ်းထဲမှာ ကလေးငယ်ထိတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဟော်မုန်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေဟာ အရွယ်ရောက်သူတွေထက် အရိုး ၇၀ကျော်နီးပါးခန့်ဖြင့် မွေးဖွားလာတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား? ဒီအရိုးတွေက သူတို့ ကြီးထွားလာတာနှင့်အမျှ အရိုးတစ်ခုတည်းအဖြစ် အချင်းချင်း ပေါင်းစည်းသွားကြပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အံ့သြဖွယ်ရာတွေက အဆုံးမဲ့ဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် ဒီနေ့မှာ ကလေးငယ်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မေမေတို့ သိထားနိုင်အောင် အချက်အလက်တစ်ချို့ကို မျှဝေပေးလိုပါတယ်။
၁။ ဘေဘီလေးတွေဟာ သူတို့မွေးဖွားချိန်ကစပြီး အသက်အောင့်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဒါက တစ်ချိန်တည်းမှာ စုပ်ယူတာ၊ မျိုချတာ လုပ်နိုင်တာကြောင့် အစာစားတဲ့အချိန်မှာ အသုံးဝင်လာပါတယ်။
၂။ ဘေဘီလေးတွေဟာ မြင်နိုင်စွမ်း အကန့်အသတ်ဖြင့် မွေးဖွားလာပြီး နောက်လတွေမှာ ဖွံ့ဖြိုးလာပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ အသိအမှတ်ပြုတဲ့ ပထမ အကွာအဝေးက သူတို့မိခင်ရဲ့ ရင်ဘတ်နှင့် မျက်နှာအကြား အကွာအဝေးနှင့် အံကိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၆လအရွယ်မှာ အမြင်အာရုံပြည့်စုံစွာ ဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်။
၃။ သူတို့က ဖခင်ရဲ့အသံထက်စောပြီး မိခင်ရဲ့အသံကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ဖခင်ရဲ့ အသံကို မှတ်မိနိုင်ဖို့ ၁၅ရက်ခန့် အချိန်ယူရပါတယ်။
၄။ ကလေးတွေဟာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပြုံးတတ်တဲ့ သက်ရှိတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်သွယ်ဖို့ ပထမဆုံး အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုကို ဖြစ်စေတာကြောင့် ထိုအပြုံးကို အစပိုင်းမှာ ရှင်သန်မှုယန္တရားအဖြစ် အသုံးပြုပါတယ်။ ဒါကို လူမှုရေးအပြုံးလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။
၅။ မွေးကင်းစတွေမှာ အနံ့အာရုံခံ အဖွံဖြိုးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့ဟာ အနံ့ခံခြင်းအားဖြင့် သူတို့မိခင်ကို အသိအမှတ်ပြုကြပါတယ်။
၆။ မျက်ရည်မကျဘဲ ငိုကြွေးတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့မှာ မျက်ရည်မရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့မျက်လုံးကို စိုစွတ်အောင် ထိန်းပေးသည့်မျက်ရည်ကို ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ၂လ- ၄လခန့်လောက်မှာ မျက်ရည်အပြည့်နဲ့ ငိုတာကို သင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
၇။ အဆီထွက်များတဲ့ အရေပြားပြဿနာ။ ဒါကများသောအားဖြင့် ကလေးရဲ့ ဦးခေါင်းပေါ်မှာ ပေါ်လာသော အဝါ-အညိုရ်အစက်အပြောက်များဖြစ်ပါတယ်။ cradle cap လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ ဒါကပုံမှန်ပါပဲ။ တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါက ဆိကြည်ဂလင်းရောင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။
၈။ ပွေ့ဖက်ခြင်းရဲ့ အရေးပါမှု- သူတို့က ဖူးဖူးမှုတ်ခံရတာကို ချစ်ကြပါတယ်။ ဒါက သူတို့ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအတွက် အရေးပါပါတယ်။ ၎င်းက ကြီးထွားမှုနင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သော ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။
၉။ သူတို့ဟာ ဂုံညင်းရိုးမပါဘဲ မွေးဖွားလာကြပါတယ်၊ ဂုံညင်းရိုးက ဒူးအဆစ်ရဲ့ အဓိကအရိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအစား ပေါင်ရိုးကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ အရိုးနုတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒီအရိုးနုဟာ ပထမ ၆လအတွင်းမှာ အရိုးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
၁၀။ သူတို့ဟာ အငန်အရသာကို ခွဲခြားလို့ မရသေးပါဘူး။ အရသာအမျိုးမျိုးကို မြည်းစမ်းနိုင်စွမ်းဖြင့် မွေးဖွားလာသော်လည်း ဆားငန်အစားအစာအတွက် အရသာဟာ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၄လအထိ မဖွံ့ဖြိုးနိုင်သေးပါ။
ဘေဘီလေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အံ့ဖွယ်ရာတွေ များစွာရှိပါတယ်။ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များအရ မေလမှာ မွေးဖွားတဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာ မွေးဖွားချိန်မှာ ကိုယ်အလေးချိန်ပျမ်းမျှ ၂၀၀ဂရမ်ပိုများတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကလေးတွေဟာ လဲလျောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ခေါင်းတွေကို ညာဘက်သို့သာ ပိုလှည့်ကြောင်း ပြသတဲ့ လေ့လာမှုများလည်း ရှိပါတယ်။